Malunga nathi -Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd.
Shenzhen HUANET Itekhnoloji CO., Ltd.Ngomnye wabenzi abaphambili beemveliso zenethiwekhi ze-IP eChina.Ikomkhulu lenkampani lilele eShenzhen kwaye iiofisi zeshishini zimiselwe kwizixeko eziphambili kulo lonke ilizwe. Ngamaziko amabini eR & D e-Shenzhen nase Shanghai, kunye neqela lobunjineli be-R & D ukuphuhlisa kunye nokuphucula itekhnoloji kunye neemveliso zethu. Iimveliso zethu zigubungela i-EPON / GPON ONU / ONT / OLT, CWDM / DWDM / OADM, SFP, Gigabit Ethernet Switches kunye neMveliso yoKhuseleko lweNethiwekhi.
I-HUANET ibisoloko igxile kuphumeleleyo kunye nakwinkqubela phambili kwinkalo yetekhnoloji ye-IP, kunye nokwenza imizamo emikhulu yokugcina itekhnoloji entsha. Sityalile i-15% yemali yokuthengisa yonyaka kwi-R & D minyaka le. Sijonge ukugubungela zonke iimveliso ezisisiseko kuthungelwano lwe-IP, ukhuseleko lwe-IP kunye neendawo zolawulo lwe-IP, kwaye phantsi kwesi siseko, sinokukhulisa isisombululo se-Intanethi sesizukulwana esilandelayo. Isisombululo esitsha se-Intanethi esisisombululo siza kugxila kwizisombululo zedatha yesizukulwana esitsha kunye nezisombululo zenethiwekhi ezisisiseko, eziza kusetyenziswa kakhulu kwakamsinya.
Silunga ngamandla ukuba impumelelo yeshishini ivela kwimpumelelo yabathengi, ukunyaniseka nokuthembeka, ukuvuleka kunye neshishini, ukuvelisa izinto ezintsha kunye nomgangatho kunye nomsebenzi weqela. Ukukhokelwa zezi zixabiso ziphambili, i-HUANET iseke kwaye yagcina ukuphucula inkqubo yolawulo lomgangatho ovakalayo kunye nenkqubo yeshishini lenkcubeko. Siza kugxila ngokuqhubekayo kubuchwephesha obutsha kumacandelo eziko ledatha, ikhompyutha yefu, i-Intanethi eshukumayo kunye nonxibelelwano olutsha oluvelayo, kwaye sihlale sizimisele ukuba ngumboneleli obalaseleyo kwiziko ledatha lesizukulwana esitsha kunye nesisombululo sekhompyuter kwilifu kunxibelelwano lweshishini.
Ukuqaqamba koNxibelelwano ngo-2002 eShenzhen yasekwa kwiimveliso zonxibelelwano ezibonakalayo, uphando kunye nophuhliso;
U-2003 waba ngomnye wamashishini angama-50 aphambili enkxaso kumashishini aphezulu obuchwepheshe, ukufikelela kwinkxaso ekhethekileyo kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezenzululwazi Nobuchwephesha eShenzhen ngokuphindaphindiweyo;
Ngo-2005 usungule i-transceiver elawulwayo, izixhobo zokuphinda i-OEO, kwaye unikezele ngemveliso ye-OEM, i-OEM;
U-2006 wazisa uthotho lwemodyuli ebonakalayo; isungule uthotho lwemodyuli ye-10G;
I-2008 isungule inani le-WDM erhabaxa kunye nezixhobo zebhodi yokuguqula i-DWDM, kunye nokubonelela ngezisombululo ezifanelekileyo zothutho;
Ngo-2009 owokuqala ukubonelela ngeemveliso ze-EPON ONU OEM;
Yasekwa ngo-2012, Shenzhen ukugqwesa ifayibha optic izixhobo zothumelo Co., Ltd., iingcali ukuthengiswa izixhobo playle kathathu kunye nezixhobo zothumelo womnatha, iimodyuli ifayibha optic.
Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, Umthumeli weXfp, I-Sfp C ++, Ixabiso leHuawei Olt, IHuawei Qsfp +, Imodyuli yeFiber Optical,